Jwxo-shiil iyo Saraakiil Eritrean ah oo Kismayo Jooga – Rasaasa News
Jwxo-shiil iyo Saraakiil Eritrean ah oo Kismayo Jooga
Jan 19, 2011 Eritrea, Jwxo-shiil, Jwxo-shiil iyo Saraakiil Eritrean ah oo Kismayo Jooga, Ogaden, Somali
War aanu ka helay ilo sireedyo naga soo gaadhay magaalada Kismayo, ayaa waxay sheegayaan in saraakiil Eritrean ah, ururka Al-shabaab qaybta Al-muhaajiriin iyo Jwxo-shiil ay xalay ku lahaayeen kulan qarsoodi ah magaalada dekada ah ee Kismaayo.
Saraakiisha Eritreanka, Jwxo-shiil iyo qaar ka mid ah ururka Alshabaab, ayaa maalintii Axada ahayd waxay gaadheen magaalada Kismayo. Ilaha aanu warkan helay ma ayna xaqiijin waxa ay ku yimaadeen Kismayo kooxdani, Doon, Diyaarad iyo dhul midna.
Ma jiraan cid ka warhaysa joogitaanka kooxahan ka timid Eritrea, waxayna shirar qarsoodi ah la yeelanayaan xubno u badan Ajaanib ah oo ka tirsan ururka Al-shabaab loona yaqaan Al-muhaajiriin, oo iyagu ah kuwa hogaamiya siyaasada ururka argagixisada ah ee Al-shabaab.
Waxaa ay sheegayaan ilaha aanu warkan ka helay in ayna heli karin waxyaabaha ay ka wada hadalayaan kooxahani, balse waxaa ay aad ula socdaa meelaha ay tagayaan iyo kulamadooda. Waxaa nagu maqalo ah bay dheheen ilo-wareedyadu in ay saraakiisha Eritreanka ah, Jwxo-shiil iyo qaar ka mid ah masuuliyiinta Al-shabaab ay u kicitimi doonaan dal carbeed oo aanan wali helin magaciisa.
Soo galintaanka gabalada Jubooyinka ee saraakiisha Eritrea iyo Jwxo-shiil, ayaa waxay u egtahay in xukuumada Eritrea ay ka samaysanayso saldhig xoog leh magaalada dekada ah ee Kismayo, arintaas oo ay dabada ka riixayso dawlada Masar oo iyadu wakiilo ku leh caasimada Somaliya ee Muqdisho.
Qorshan ay wataan kooxahani, ayaa u eg in la rabo in si fudud loogu minjo xaabiyo oo laga faa,iidaysto, isqabqabsiga ka dhex jira xukuumada taagta daran ee Somaliya, oo la rabo in uu caalamku ku badalo xukuumad ka tayo fiican.
Haddii aan laga hortagin qorshan socda ee ay lugta kula jiraan Eritrea iyo Masar, waxay Somaliya noqon doontaa dal ay awood weyn ku yeeshaan argagixisadu, dhibaato deganaansho la,aana ka abuurta dalalka Kenya, Itobiya iyo Jabuuti.
Xukuumada Eritrea ayaa si xoog leh lugaha ugula jirta colaadaha ka jira geeska Afrika, waxayna xukuumadani adeegsataa Jwxo-shiil, oo ah ninka xukuumada Eritrea kala taliya sifooyinkii lagu sii hurin lahaa colaadaha ka jira dalka Somaliya.
Qabridahare: Maxaabiis Rasaas Boolisku Riday u Dhintay iyo Booliskii Xabada Lahaa oo Xidhan
Madaxweynaha Ismamulka Dawlad Degaanka Somalida oo ku Hakaday London